Maxkamada sare ee Kenya oo dib u dhigtay xiritaanka xeryaha Qaxootiga | KEYDMEDIA ONLINE
Maxkamada sare ee Kenya oo dib u dhigtay xiritaanka xeryaha Qaxootiga
Maxkamadda sare ee dalka Kenya ayaa bixisay amar ah in aan la xiri karin xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab iyo Kaakuma halkaasoo ay Soomaali badan ku jiraan, waxaana maxkamaddu ay dib u dhigtay muddo.
NAIROBI, Kenya - Maxkamadda sare ee dalka Kenya ayaa si ku meel gaar ah u joojisay go’aankii kasoo baxay dowladda Kenya ee ahaa in la xiri doono xeryaha qaxootiga Dhadhaab iyo Kaakuma oo ay ku jiraan in ka badan 400,000 oo qaxooti ah oo intooda badan ay Soomaali yihiin, waxaana ku eg maanta muddadii ay dowladda Kenya u qabatay Qaxootiga Soomaaliyeed.
Maxkamadda ayaa gaartay go'aankan, waxa uuna ka dambeeyay markii siyaasiyiin maxali ah gudbiyeen dacwad ka dhan ah go’aanka dowladda Kenya ay ku xireyso xeryahaa qaxootiga ee Dhadhaab iyo Kaakuma, iyadoo gabaad uga dhigatay arrimo la xiriira ammaanka waddankeeda, balse arrintani ay la xiriirto siyaasadda iyo xiriirka sii xumaanayay ee ka dhaxeeya labada waddan ee Soomaaliya iyo Kenya.
Go'aanka maxkamadda ayaa ah in dib loo dhigay muddo 30 cisho ah kiiska la xiriira xeryaha ay ku jiraan qaxootiga Soomaaliyeed. 24 -kii bishii hore ayey ahayd markii ay Kenya ku dhawaaqday in ay albaabada u laabayso xeryaha Dhadhaab iyo Kaakuma waxaana Hay’adda Qaxootiga adduunka u qaabilsan Qaramada Midoobey ee UNHCR ku wargelisay in muddo 14 cisho lagu xiro labada xero ee ugu badan qaxootiga Soomaaliyeed.
Kiiskan ayaa sidoo kale daba socday kiiskii dacwadda Badda ee dhacay 15 -kii bishaasi kaasoo u dhaxeeyay dalalka Soomaaliya iyo Kenya, waxaana dowladda Kenya ay imaan weysay dhageysiga dacwaddaasi oo ku beegneed 15 Maarso 2021.